“Manchester United waa inay dalab ka gudbiso N’Golo Kante xagaagan” – Gool FM
“Manchester United waa inay dalab ka gudbiso N’Golo Kante xagaagan”
(Manchester) 06 Abriil 2019. Kooxda Manchester United waa inay dalab ka gudbisaa laacibka khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan sidaa waxaa sheegaya Robbie Savage.
Savage, kaasoo ka soo baxay nidaamka dhallinyarada kooxda Man United ayaa sheegay in kooxdu ay soo qaadato xiddiga reer France kaasoo ka caawin kara in Red Devils ay dib ugu soo laabto hoggaanka horyaalka Premier League.
Kante ayaa markale fure u noqday kooxda Chelsea xilli ciyaareedkan, laakiin 28-sano jirkaan ayaa laga ciyaarsiiyaa boos aan ahayn midkiisa, iyadoo halkii hore ee uu Blues uga dheeli jiray lagu bedelay Jorginho, macallin Maurizio Sarri ayaana sidaas yeelay.
“Kante waxa uu Leicester City kula guuleystay Premier League, si la mid ah Chelsea, waxaana laga yaabaa inuu horyaalkiisa saddexaad ku qaado garoonka Old Trafford, waa inay Man United dalab ka gudbisaa isaga xagaagan.” ayuu Savage u sheegay The Mirror.
Xiddiga ku guuleystay koobka Adduunka 2018 ayaa ka caawiyey Leicester inay hanato horyaalka Premier League ka hor inta uusan ku soo biirin Chelsea oo sidoo kale uu la qaaday horyaalka intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee kooxda.
Xilli ciyaareedkan, laacibkan khadka dhexe Kante ayaa dhaliyey afar gool waxaana uu dhiibay afar gool oo kale 44 kulan oo uu tartammada oo dhan u saftay kooxda reer London.
Shaxda rasmiga ah kulanka Real Madrid iyo Eibar kulankooda galabta oo la shaaciyey